Ndeupi mutsauko uripo pakati pekudzokerera uye neshanduko muitiro? | Ehupfumi Zvemari
Ndeupi mutsauko uripo pakati pekudzokerera uye neshanduko muitiro?
Ehezve, mumusika wemasheya, kumwe kwekukanganisa kukuru kunogona kuitwa mukusasiyanisa pakati peicho chaicho chiri rebound uye chii chiri shanduko muitiro. Zvikuru zvekuti zvinogona kukuchidzira iwe kurasikirwa nemari yakawanda mukuita kunoitwa mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti zvakakwana kuti iwe uzive mutsauko aya mafambiro ekutanga mukushanda kwemusika wemasheya. Ndiro rimwe remabasa makuru evashambadziri vadiki nepakati uye kuti mupfungwa iyi tinogona batsira iwe kugadzirisa iyi nyaya iyo iwe yaunogona kuendesa mune yako nhoroondo se saver.
Pakutanga, iyo rebound mumashamba emusika mashandiro inowanzo ine kufamba kunopfuura uye, pamusoro pezvose, kubata nguva kwazvo zvine njodzi kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Nekuti mukuita, kudzokororwa kunonzwisiswa sehunhu umo misika yequity, mushure mekudonha kwakakosha, inosangana nekukwira pane imwe nhanho munguva Nekudaro, kukwira uku hakugoneke uye, ne tango, mapopoma anoitika futi. Nenjodzi inotevera, nzvimbo yako yakavhurika mune ino nguva yekumuka kwenhema.
Nekudaro, zvakaoma kwazvo kuziva kana iri chaiyo rebound kana zvinopesana iko shanduko yemafambiro, mune ino kesi inowedzera. Pazvinenge zvichidikanwa kuratidza kuti kune kupora chaiko mumutengo chitaurwa. Iyi ndeimwe yemakiyi akakosha kusiyanisa zvirinani nekujekesa kudiki izvi zviviri zvakakosha pamusika wemasheya. Kuti nenzira iyi, iwe ugone kuita sarudzo dzako nevimbiso dzakakura dzekubudirira uye kusendamira kune kutenga kana kutengesa, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akaenzana aripo panguva iyoyo chaiyo.
1 Bounce: yekutengesa kwenguva pfupi
2 Iyo yakareba nhoroondo tsika
3 Chii chiri shanduko muitiro?
4 Ndeipi shanduko mumutengo?
5 Nguva dzekupinda mumisika
6 Zvemari asset manejimendi
Bounce: yekutengesa kwenguva pfupi
Chero zvazvingaitika, rebound inokodzera ita mashandiro ekukurumidza kunyangwe mune imwecheteyo yekutengesa chikamu. Iwe haugone kuigovera kumabasa ehukuru hwakanyanya maererano nehurefu hwayo. Nekuti iwe unomhanyisa njodzi zvakanyanya munzvimbo dzakashama dzinozoita kuti urasikirwe nemari yakawanda kubva zvino zvichienda mberi. Iwe haugone kuzvikanganwa kana iwe usiri kuda kuita kanopfuura kamwe chete kukanganisa kwaungazodemba pane imwe nguva muhupenyu hwako.
Imwe yeakanyanya kukosha hunhu hweiyo inozivikanwa seyakadzokororwa ndeyekuti chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati, mushure mekudonha kwakadzika, funga kuti mutengo wezvikamu watodonha zvakanyanya uye unozviona sezvakasikwa kuti zvinoitika . inomuka mukuchinja kwemitengo. Kusvika pakufunga kuti inguva chaiyo yekutenga masheya nemutengo unodhura. Kusvika padanho rekuita mashandiro anobatsira kubva kune yehunyanzvi yekutarisa.
Iyo yakareba nhoroondo tsika
Mupfungwa iyi, iyo rebound mumashamba emusika mashandiro chinhu chechinyakare kune ichi chimiro chechimiro kusimudzira. Hazvishamisi kuti ivo vakashandiswa kwemakumi emakore pakaitika kudonha kwakakura semhedzisiro yetsaona mumusika wemasheya. Nekuti iyo rebound ndeyekuita, pamwe ine chisimba, kune mafambiro aya mumisika yemari. Saka kuti iwe unzwisise zvakajeka, irori zano rakasarudzika rekufananidza kupihwa uye kudiwa. Nekuti izvo zvazviri ndezvekumisa kwechinguvana kutengesa kwazvino kweimwe kudzika.
Kune rimwe divi, kana kudzoka mumusika wemasheya kwakasiyaniswa nechimwe chinhu, imhaka yekuti mafambiro echisimba kwazvo. Ndokunge, iwo akanyanya kuwedzeredza maitiro, pamwe nekuwedzera mumutengo uyo inogona kudarika 2% mazinga. Iko kupi mutsauko uripakati pekukwirisa uye mashoma mitengo iri yakafara kwazvo. Asi tichifunga kuti mafambiro aya anogara kwenguva shoma. Nekuti vanogona kupedza mashoma ekutengesa zvikamu, uye mune chero mamiriro ezvinhu asiri anopfuura mavhiki mashoma seganho pakukura kwavo. Nguva iyo iwe yaunogona kushanda pasi peiyo yakasimba yekusimudzira yazvino uye iyo inogona kukubatsira iwe kuita inobatsira mabasa anovavarira kune ipfupi izwi.
Chii chiri shanduko muitiro?
Kune rimwe divi, kune mumwezve munhu akatarisana zvachose uye icho hachisi chimwe kunze kwekuchinja kwemaitiro. Zvakanaka, kufamba uku hakunei nekudzokeresa mumisika yemari. Nekuti mutsauko wekuwedzera zvakanyanya maererano nehurefu hwayo. Kusvika padanho rekuti shanduko yemaitiro inogona kugara kwemakore mazhinji, sezvauchazoziva kubva pane chako chiitiko. Kana chiitiko ichi chikaitika, inguva yekutora zvinzvimbo mumusika wemasheya, kunyangwe kubva munzira dzine hukasha kuita kuti mabasa abatsire.
Imwe yekiyi dzekuona kuti isu takatarisana neshanduko yemafambiro ndeye apo panenge paine kuita kushoma kana kushoma kwekutendeuka mune imwe nzira kana imwe. Aya mafambiro anoperekedzwa nekuwedzera kwakakosha maererano ne kondirakiti vhoriyamu. Kusvika padanho rekuti inokwezva kwazvo kune vashoma nepakati varimi. Imwe nzira yekuziva shanduko idzi mumutengo inogadzirwa kuburikidza nenhamba dziripo mukuongorora kwehunyanzvi. Semuenzaniso, kuburikidza nemakenduru seimwe yeanomiririra zvakanyanya.
Ndeipi shanduko mumutengo?
Ehezve, iri kumusoro, ndeimwe yemafambiro akanaka kwazvo kune zvako zvaunofarira. Nekuti zvinoreva kuti mari iri kupinda mukuchengetedza kana nhumbi yemari inobatanidzwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kupinda munzvimbo dzavo pasina njodzi dzakanyanyisa uye nekwaniso yakakura mukudzokororazve kwayo. Mhosva yakanyanyisa inomiririrwa neinonzi kusimuka pachena. Ndokunge, hakuchazove nekupokana kumberi uye ine iyo yese yemahara nzira kumberi. Ichi chisarudzo chakaderera pane chakanakira iwe kuti uise mari mumisika yemari.
Nezve iyo nguva yekufamba uku, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hazvisi zvakafanana nguva dzose. Asi pane zvinopesana, zvinoenderana neimwe nhevedzano yezvinhu zvakabatana zvakanyanya nemutengo wemidziyo yemari. Kubva pamakore mashoma kusvika kune yakareba iyo inogona kutosvika makore angangosvika gumi uko iyo nzvimbo dzevatengi dzinoiswa pane dzevatengesi. Iko kune chaiko kufarira mukutenga zvikamu zvavo uye izvi zvinoshandura mukukwira kunofambira mberi mumutengo wezvikamu zvavo. Pakutanga, nenzira yechisimba maererano nesimba rayo, kufambira mberi zvishoma nezvishoma. Kunyangwe neapo neapo neapo mutengo kururamisa.
Nguva dzekupinda mumisika
Chero nzira, hurongwa hwekudyara huchave hwakasiyana mune yega yeaya maviri masisitimu manejimendi ekuchengetedza Nekuti zvirokwazvo, nepo iwo marezinesi akagadzirwa muma bounces dzinofanira kunge dzakapfupika, yakatomboitwa muchikamu chimwe chete chekutengesa. Izvo pazviri pane zvinopesana, mune inochinja shanduko zvinogara zvichikurudzirwa kuita zveapakati uye zvenguva refu mashandiro. Saka kuti nenzira iyi, chikamu chakanaka chekuwedzera mumisika yemari chinogona kuunganidzwa. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Semhedzisiro yezviito izvi, hapana mubvunzo kuti manejimendi enzvimbo dzekuchengetedzeka achasiyana zvakanyanya. Nokurapwa kwakasiyana, zvese zviri zviviri mukuchengetedza mari uye kugadzirisa nguva yekupinda uye yekubuda mumidziyo inodiwa yemari. Kana iwe ukateerana nemirau iyi, iwe uchave uine kubudirira kwakawanda mumabasa auchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Icharatidzirwa pamusoro pezvose mu capital inowana optimization izvo zvinogona kuwanikwa nevashambadzi vadiki nepakati.
Zvemari asset manejimendi
Pane rimwe divi. Izvo zvakare zvinodiwa kuti uongorore kwete chete iyo iyo nguva inokanganisa iyi yakasarudzika manejimendi mune yekuchengetedza portfolio. Nekuti marongero acho akatosiyana, zvese muchimiro nezviri mukati. Nekuti mune rebound pamberi pechimwe chinhu iwe unofanirwa sarudza kukosha kwebasa racho pamusoro pezvimwe kufunga. Nepo pane izvo zvinopesana, mune inochinja shanduko, kuchengetedzeka ndicho chinangwa chevashoma nepakati varimi. Kusvika pakuti ivo vanogona kuve nenzvimbo dzakavhurika kwenguva yakareba. Ndiyo imwe yekiyi yekunzwisisa mafambiro ese ari maviri.
Sezvauchazoona nenzira iyi, isu tiri kutaura nezvekufamba kwakasiyana zvachose uye kuti munzira zhinji havana chekuita nemumwe. Kunyangwe hazvo chinangwa chichava chakafanana nguva dzose, hachisi chimwe kunze kwekuwana yakanakidzo kudzoka pane iyo mari yakaitwa. Ndokunge, shure kwezvose, izvo zvauri kumirira kuburikidza aya akasarudzika mamodheru mamodheru. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mukana wekushandisa imwe kana imwe nzira yekudyara. Mukati iko kukura kwemabasa, iyo mari yekudyara iwe yaunounza nguva dzese kana kukura kwaunoda kwemafambiro ako mumisika yemakambani kunoonekwa. Ipapo chete ndipo paunogona kubudirira munyika inogara iri yakaoma yemari. Chinhu chisiri nyore nguva dzose kuita, sezvo iwe pachako uchizoziva kubva pane zvaunowana mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeupi mutsauko uripo pakati pekudzokerera uye neshanduko muitiro?
Ese ma indices emusika weSpanish wemusika